पुराना पटक देखि मान्छे यसको विकास र आफ्नै क्षमता को मूल्यांकन गर्न ठूलो महत्त्व संलग्न गर्नुहोस्। शताब्दीयौंदेखि पहिले, वहाँ एक व्यक्ति गलत सदिश विकास छान्नुभएको छ जो अनुसार एक राय थियो। कुन अर्थमा? एक प्रयास बनाउन र आत्म-विकास मा संलग्न भन्दा, मान्छे तिनीहरूलाई घेरने के काम गर्न रोक छैन। सानो वा बिल्कुल एक मानिस गर्दै सकेसम्म सहज उहाँको वरिपरि अवस्थाको बनाउन खोज्छ। अर्कोतर्फ, सबै मान्छे भौतिकवादी सोच छ। धेरै मानिसहरू तिनीहरूले के मूल्यांकन, र पैसा किनेको छैन कुराहरू कदर। यो सबै भन्दा राम्रो "लगानी" को, आध्यात्मिक सामाजिक र शारीरिक सक्षमता सुधार गरेको प्रयासमा छन् कि पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं सम्भावित छ?
को XX शताब्दीमा बस्ने एक चिरपरिचित दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक Uilyam Dzheyms, कि सबै भन्दा मानिसहरू मूल राखे कि सम्भावित महसुस छैन निष्कर्ष आए। उहाँलाई अनुसार, हरेक बच्चा जस्तै संभावनाहरु, आफ्नो आमाबाबु पनि लाग्छ गर्नुभयो जो छ। किन भन्दा मान्छे अझै पनि आफ्नो प्रतिभा को विकास को एक कम स्तरमा रहने कि छ - आफ्नो क्षमता को कसरी व्यापक बादल मडारिरहेको महसुस छैन। मानव क्षमताहरु को कसरी विकास उदाहरण विचार गर्नुहोस्। नयाँ सामाजिक कौशल एकदम चाँडै गठन गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू यति चाँडै केहि सिक्न सक्छ भनेर थाह थियो भने, त्यसपछि आफ्नो जीवन पूर्णतया फरक तरिका विकास हुनेछ। उदाहरणका लागि, साधन मा राम्रो खेल्न र आफ्नो शिल्प को एक मास्टर, औसत व्यक्तिगत लगभग एक वर्ष लिन रूपमा जानिन्छ सक्षम हुन। यो एक धेरै? छैन सबै! अवसर र मानव क्षमता पनि समय यस्तो छोटो रकम उहाँले साँच्चै सुन्दर कुरा सिक्न सक्छौं भनेर अविश्वसनीय। त्यसैले, तपाईं विकास, वा विशेष उद्देश्य एक निश्चित स्तर पुग्न छैन भन्ने विचार, अक्सर अल्छी मान्छे को STEREOTYPES को आधारमा गठन गर्दै हुनुहुन्छ। बस अचम्मको कसरी हेर्न मानव क्षमता, बस लक्ष्य सेट र पछि लागोस्। तर कि उद्देश्य हासिल र मानिसको नयाँ संभावनाहरु खोल मदत गर्नेछ?
क्रमबद्घ प्रयास महत्त्व
अधिकांश मानिसहरू आफ्नो आकांक्षाओं पर्याप्त लगनशील भई लागिरहेमा नदेखाउनुहोस् किनभने सफल व्यवस्थापन भएन।
धैर्य र एक सानो प्रयास। यो उखान ठ्याक्कै क्रमबद्घ प्रयासमा महत्त्व जोड दिन्छ। केही तरिका को प्रतिभा विकास गर्न, वा unconvincing हेर्न प्रयास र परिणाम एक प्रयास मा विजयी भनिन्छ सक्दैन भने पनि हुन, यो हरेक दिन गर्भवती दिशा मा बाटो बनाउन जारी गर्न र हरेस महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै मानिसहरू एक व्यक्ति को विशेष क्षमता जन्म देखि उहाँलाई विशेषता भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसैले, मान्छे प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूले मनाउन। एउटै, धेरै बन्द तिर्ने। ती प्रतिभाशाली मान्छे जन्म थिए लाग्छ छैन। प्रायजसो, हामी मेहनत काम र अत्यधिक उत्प्रेरणा सकेसम्म धेरै प्रतिभाशाली मानिसहरू हेर्न छैन। यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत विकास सामना गर्न हरेक प्रयास गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यी प्रयासहरु ठूलो भित्री सन्तुष्टि प्रदान।
शारीरिक सक्षमता नै सिद्धान्त विकसित छन्। यस सन्दर्भमा, यो हामी धेरै स्वतन्त्र, अधिक छ। उदाहरणका लागि, जसको उचाइ एक व्यक्ति - 160 सेन्टिमिटर, एक पेशेवर बास्केटबल खेलाडी कुनै कुरा उहाँले कोशिश कसरी बन्न सक्दैन। तर, यो व्यापार मा सफल, उहाँले अझै पनि सक्षम, यदि यो लक्ष्य लागि निरन्तर प्रयास हो।
मानव क्षमताहरु को विकास प्रोत्साहन, यो सही छनौट र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम हुन महत्त्वपूर्ण छ। फेरि, "तपाईं न समातेर हुनेछ, दुई hares पछि चलाउन।" को adage, सम्झना व्यक्तिगत क्षमता र प्रतिभा विकास गर्न, यो महत्त्वपूर्ण मात्र आफ्नै तरिका, कुनै कुरा के जान पनि पूर्ण यसलाई ध्यान, यो बाटो रोज्ने अधिकार छ, तर। हामीलाई सानो कद, भरोसा मानव सम्भावनाहरू अनन्त छन् कि मानिसको उदाहरण फर्कन गरौं। उहाँले एक पेशेवर बास्केटबल खेलाडी बन्ने लक्ष्य सेट। यो स्थितिमा के सकारात्मक पक्षमा उल्लेख गर्न सकिन्छ? पहिले, तथ्यलाई कि मानिसहरूले घमन्डी लक्ष्य सेट गर्न डराउँछन्। दोश्रो, यो हरेक प्रयास गरिरहेको छ र दिन छैन अप यसलाई आवश्यक सामना गर्न हुनेछ कि कठिनाइहरूको बावजुद। तर, व्यक्तिमा एक पेशेवर बास्केटबल खेलाडी अझै पनि सफल छैनन् बन्ने यसको लक्ष्य हासिल गर्न। के गलत हो? यो कुरा राम्ररी सडक चयन गरिएको छ।
सम्भावनाहरू को सबै भन्दा राम्रो बोध लागि मान्छे soberly आफ्नो क्षमता र परिस्थिति achievable लक्ष्य सेट गर्न आकलन गर्नुपर्छ। एकै समयमा यो विकास रोक्न र चुचुराहरूको को विजय हस्तक्षेप गर्न सक्छन् जो को समाधान पारित, एक्स्ट्रानिअस कार्यहरू द्वारा विचलित हुन महत्त्वपूर्ण छ।
अवसर र मानव क्षमता यो आलस्य, inertia कुनै पनि व्यक्ति को गुणहरू हटाउन सक्षम छ भने मात्र disclosed हुन सक्छ। आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न यस्तो अवरोध सामना समस्या को मूल्य को जागरूकता मदत गर्नेछ - प्रेरणा। इच्छा उत्प्रेरित खेल मान्छे एक विजेता हुन मा, धन छ महिमा र ख्याति जीत। यो सबै तिनीहरूलाई निरन्तर सुधार र थप विश्वस्त बन्न मद्दत गर्छ।
सबैभन्दा अरूलाई मानिस र आफ्नो असाधारण प्रतिभा र शरीर को क्षमता को अधिक रोचक सामाजिक अवसर हेर्न छैन। यसले असाधारण मानसिक गुणहरू आँखा पकड छैन किनभने गर्दा मानव शरीर, प्रत्येक सूचना को अभूतपूर्व क्षमताहरु। मानिसहरू सीमा छ कि लाग्छ गर्छन। वैज्ञानिकहरू अनुसार, आंशिक यस कारण लागि, मानिसहरू अक्सर केही अवरोध वा उचाइ, हुनत सम्भावित उहाँले यसको लागि छ हटाउन सक्दैन। मानव सम्भावनाहरू सीमा, तनावपूर्ण अवस्थामा परीक्षण गर्न सकिन्छ गर्दा मानसिक लाइन - सामान्य तरिकामा -perestaot कार्य restrains छ। यो उदाहरण धेरै भनेर प्रमाणित गर्छ। पक्कै पनि तपाईं दोश्रो एक उचाइ दुई भन्दा बढी मीटर overcomes वा tenfold आफ्नो सामान्य अधिक एक शक्ति exerts मा खतरा को डर छ जो मानिसहरू बारेमा सुनेको छु। यो सबै मानव क्षमताहरु धेरै व्यापक हामी सोच accustomed भन्दा हुन् भनेर सुझाव। मनमा यो साथ, हामी हामी काँध मा छैन केहि छ कि लाग्छ हुँदैन।
विशेषताहरु के मान्छे विभिन्न क्षेत्रहरू प्रदर्शन गरिएको छ, विचार गर्नुहोस्। लगभग सबै हासिल यी वास्तविक अवस्थामा पुष्टि गर्नुहोस्।
एक चिसो वातावरणमा रहेको
एक व्यक्ति पानी मा खर्च गर्न सक्छन् समय - एक घण्टा र एक आधा। मृत्यु को यो छोटो अवधि तर्साउन कारण हुन्छ समयमा, समारोह वा हृदय गिरफ्तारी सास labored। यो शारीरिक सक्षमता बस विदेश विस्तार गर्न अनुमति छैन भनेर जस्तो थियो। तर त्यहाँ अन्य तथ्यहरू छन्।
WWII सर्जन्ट समयमा सोभियत सेना जसबाट आफ्नो लडाई मिसन पूरा, चिसो पानी मा swam 20 किलोमिटर। को सैनिक देखि एक यस्तो दूरी लिए 9:00 हटाउन! यो मानव क्षमताहरु को दुनिया हामी कल्पना भन्दा धेरै ठूलो हो मतलब?!
यो वास्तवमा र ब्रिटिश मछुवा प्रमाणित गर्छ। hypothermia आफ्नो सबै comrades हत्या, तर यो मानिसको बारेमा पाँच घण्टा लामो किनभने चिसो पानी मा जहाज नष्ट हुनु पछि 10 मिनेट भित्र। तर उहाँले किनारमा मिल्यो पछि, उहाँले खाली खुटा अर्को तीन घण्टा हिंडे। साँच्चै, चिसो वातावरण सन्दर्भमा, मानव सम्भावनाहरू सामान्यतः विश्वास छ भन्दा धेरै व्यापक छन्। र के अन्य क्षेत्रमा बारेमा?
भोक को भावना, वा तपाईं कत्तिको खाना बिना बाँच्न सक्छ
त्यहाँ खाना बिना एक व्यक्ति दुई बारेमा सप्ताह खडा सामान्य सम्झौता छ। तथापि, केही देशहरूमा डाक्टर मानव शरीर को शानदार संभावित महसुस मदत अचम्मको रेकर्ड देखेका छौं।
उदाहरणका लागि, एक महिला 119 दिनको लागि भोक थियो। यो अवधिमा उनले आन्तरिक अङ्गहरू कायम गर्न भिटामिन को दैनिक खुराक प्राप्त। तर यो 119 दिन भोक हड्ताल - छैन मानव क्षमताहरु को सीमा छ।
स्कटल्याण्ड मा, दुई महिला क्लिनिक मा जाँच र वजन को प्रयोजन को लागि भोकभोकै पर्छन् गर्न थाले। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर ती एक 236 को लागि खाना प्रयोग गर्नुभयो, र दोस्रो - 249 दिनको लागि। दोस्रो सूचक अझै अहिलेसम्म जोकोहीले surpassed छैन। हाम्रो शरीर को स्रोतहरू साँच्चै धेरै धनी छ। तर यति लामो समय को लागि एक मानिस खान सक्नुहुन्छ भने, त्यहाँ उहाँले पिउन सक्दैन कति बारेमा प्रश्न छ।
पानी - जीवन?
तिनीहरूले पानी बिना एक व्यक्ति 2-3 दिन भन्दा कुनै थप उधारो गर्न सक्छन् भन्छन्। वास्तवमा, यो आंकडा व्यक्तिगत मानव क्षमताहरु, शारीरिक गतिविधि र परिवेश तापमान मा निर्भर गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले सर्वोत्तम परिस्थितिमा पानी बिना केवल 9-10 दिनको लागि बच्न सक्नुहुन्छ भन्छन्। यो सत्य हो? यो सीमा छ?
को अर्द्धशतकको, एक मानिस थियो Frunze फेला, एक टाउको चोट प्राप्त र एक चिसो र एक्लो स्थानमा 20 दिन को मद्दत बिना अन्यथा थियो। उहाँले फेला परेन, त्यो सार्न गर्नुभयो, र आफ्नो नाडी बल्लतल्ल detectable। तर, अर्को दिन 53 वर्षीया मानिस खुलेर बोल्न सक्षम थियो।
र अझै मामला। द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा इङ्गल्याण्ड मा, जहाज sank। को को भण्डारे भन्ने अटलांटिक महासागर मा दुर्घटनाग्रस्त जहाज, एक डुङ्गा मा बच र यो चार र आधा महिना मा बसे!
अन्य शानदार रेकर्ड
मान्छे आदर्श र कहिलेकाहीं अविश्वसनीय उपलब्धि हुन मानिन्छ कि ती भन्दा अझ ठूलो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। एक अवचेतन स्तर मा छ जो हाम्रो मस्तिष्क, सबै कुरा बाहिर मा एक व्यक्ति संकेत गर्छ। यस्तो संयन्त्र पक्कै हाम्रो शरीर लाभ ल्याउनेछ। तर, यो कसरी काम गर्छ समझ यस्तो प्रणाली, हामी विकास गर्न निर्णय गरे जो कि क्षेत्र, मा धेरै ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
कि मानव क्षमताहरु देखाउन होइन उल्लेख सबै रेकर्ड अविश्वसनीय उच्च हो। यी उपलब्धिहरू शक्ति भार को क्षेत्र मा सहित खेल मा छन्। साथै, त्यहाँ एक लामो समय को लागि सास फेर्न सक्ने छैन मानिसहरू हुन्। को व्यापक अवसर र संभावनाहरु देखाउन असाधारण क्षमता।
एक व्यक्तिको क्षमता भन्दा यो जो धेरै, दुर्भाग्य, आदर व्यवहार गर्न मान्छे एक श्रेणी देखाउन देखिन्छ ठूलो छ भन्ने तथ्यलाई। यी विकलांग मानिसहरू हुन्। मानव शरीर एक विशाल क्षमता छ कि यस्तो व्यक्ति पुष्टि रूपमा?
बलियो गुणहरू को प्रकटीकरण
विकलांग धेरै मानिसहरू एक योग्य छन् पछ्याउन उदाहरण ठूलो अवरोध बाबजुद लक्ष्य कसरी पछि लाग्न र कहिल्यै हरेस, मा। यस्तो कठिन अवस्थामा मानव विकास, मात्र होइन यसको परिणाम tempers वर्ण दिन्छ, तर पनि। उदाहरणका लागि, विकलांग मान्छे बीच ठूलो लेखकहरूले, कवि, कलाकार, संगीतकार, sportsmen र यति मा एक विशाल संख्या छ। यी सबै प्रतिभा - बंशाणु को हदसम्म परिणाम, तर यो केही सुविधाहरू मानिसहरूलाई देखाउँछ कि वर्ण छ, तिनीहरूलाई व्यवसायीक बनाउँछ।
इतिहास कहिलेकाहीं सानो मानिन्छ हुनत, विभिन्न क्षेत्रहरू मा सफलता हासिल गरेका ठूलो मान्छे धेरै थाह छ। यहाँ एउटा उदाहरण छ। Polina Gorenshteyn एक नर्तक थियो। त्यो encephalitis संग बिरामी भए पछि, उनको पक्षाघात। महिला उनको बिर्सनुभएन। गम्भीर रोग जडानमा खडा गरेको सबै समस्याहरूको बावजूद महिला कलात्मक मोडेलिंग मा संलग्न गर्न थाले। फलस्वरूप, उनको काम केही अझै Tretyakov ग्यालरी प्रदर्शन हुन्।
हामी reasonably हाम्रो सम्भावनाहरू दुवै शारीरिक तथा मानसिक अनन्त छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। दिइएको समय आफ्नो इच्छा र प्रयास मा केवल निर्भर मा तसर्थ, स्तर को विकास जो एक व्यक्ति छ। यसलाई सामना बाधाहरूलाई बाबजुद, उत्कृष्टता लागि प्रयास गर्न भनेर जो लागत महत्त्वपूर्ण छ।
Amoeba Proteus: वर्ग, वासस्थानमा, फोटो। यसलाई विरुद्ध amoeba चाल रूपमा?
सूक्ष्म जीव विज्ञान मा सूक्ष्म तरिका
को राशिफल को संकेत मा रूखहरू। चाखलाग्दो क्यान्सर लागि
सपना व्याख्या: विश्व अन्त्य। के सपना देख्यो?
को जाडो लागि कोरियाली गोभी:2पकाउने नुस्खा
वजन लागि मेनु। धोखा प्रणाली, र मात्र बारेमा ...
Enteroplegia: कारण, लक्षण, उपचार